गर्भावस्थामा पिसाबसम्बन्धी संक्रमण किन हुन्छ र यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
गर्भावस्थामा पिसाबसम्बन्धी संक्रमण किन हुन्छ र यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ?
स्वास्थ्यखबर बिहिबार, पुस ९, २०७७, १३:४४:०५
प्रश्न : म २७ वर्षको भएँ। मेरो पेटमा ५ महिनाको गर्भ छ। गर्भवती अवस्थामा महिलामा पिसाबसम्बन्धी संक्रमण किन हुन्छ र यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ? – रमा श्रेष्ठ, ललितपुर
डा अर्जुनदेव भट्टको उत्तर : महिलामा सामान्य रुपमा पिसाब संक्रमण बढी हुन्छ। गर्भवती अवस्थाले नै पिसाब संक्रमण हुने होइन। यस्तो अवस्थामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने र हर्मोनमा परिवर्तन हुन्छ। यस अवस्थामा भ्रुण भएको बच्चादानीले मुत्रनली, मुत्राशय र मुत्रबाहिनी नलीलाई थिचेर पिसाबको गति तेज पार्छ। यस्तो अवस्थामा पिसाब धेरै लाग्ने भएकाले पिसाब गरिसकेपछिको सरसफाइमा ध्यान दिन आवश्यक छ। सरसफाइमा ध्यान नदिँदा पनि संक्रमण बढेको हुनसक्छ। यसका साथै मुत्राशय कमजोर हुने भएकाले सम्पुर्ण पिसाब ननिख्रने हुन्छ। त्यसले गर्दा संक्रमण फस्टाउने वातावरण बन्न पुग्छ।
पिसाब फेर्ने समयमा मुत्राशयबाट केही पिसाब मुत्रबाहिनी नली हुँदै उल्टिएर मिर्गाैलामा पुग्नसक्ने भएकाले मुत्र प्रणालीको तल्लो भागमा पुग्नसक्छ। त्यसैले गर्भवतीमा मुत्र संक्रमण ज्यादै धेरै भए मिर्गौलामा संक्रमण भएर कोखा दुख्ने, जाडो भएर ज्वरो आउने इत्यादि लक्षण देखा पर्छन्। अर्को महत्वपुर्ण कुरा, महिलामा विना कुनै लक्षण पनि मुत्र संक्रमण भएको हुनसक्छ। त्यसैले गर्भवतीको पिसाब जाँच गरेर संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउनुपर्छ।
गर्भवती अवस्थामा पिसाबमा संक्रमण देखा परे त्यो आफैं निको हुँदैन। गर्भवतीमा करिब दुईदेखि आठ प्रतिशतसम्म बसना कुनै लक्षण पिसाबको संक्रमण भइरहने हुन्छ। तिनीहरुमध्ये २० देखि ४० प्रतिशतसम्ममा मिर्गौलाको संक्रमण हुने भएकाले यस कुरामा विशेष ध्यान दिएर उपचार गराउनु पर्छ।
(डा भट्ट युरोलोजिष्ट हुन्)
के सन्चो दलिएको मास्क लगाउँदा रुघा लाग्दैन भन्ने कुरा सही हो? होइन। सञ्चो दलिएको वा कुनै पर्फ्यूम वा बडी स्प्रे लगाइएको मास्क लगाउँदा त्यसले रुघा लाग्नबाट बचाउँछ भन्ने कुरा वैज्ञानिकरुपमा पुष्टि भएको छैन। प्रयोग गरिने मास्क सुख्खा र सफा हुनुपर्दछ १८ घण्टा पहिले